भानु जयन्ती कार्यक्रममा किन अनित थापा मात्र? - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनसम्पादकीयभानु जयन्ती कार्यक्रममा किन अनित थापा मात्र?
July 13, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि सम्पादकीय 0
दार्जिलिङको चौरस्तामा आज भानु जयन्ती मनाइयो। साहित्यिक अनि जातिय पर्व तर गहिरो तरिकाले हेर्दा नितान्त राजनैतिक थियो।
पश्चिम बङ्गाल सरकारका जनजाति कल्याण मंत्री बुलुचिक बराई, सिलीगुडी नगरनिगमका अध्यक्ष गौतम देव अनि मोर्चा दोस्रो खेमा महासचिव अनित थापाको उपस्थितीमा दार्जीलिङ्गको चौरस्तामा सम्पन्न भएको यस कार्यक्रमको तार कसरी राजनीतिसँग जोडिएको छैन भन्ने?
अहिले जिटिए राज्य सरकारको हातमा छ। राज्य सरकारले मनोनित गरेका जिटिए प्रशासक सुरेन्द्र गुप्ता जिटिए चलाइरहेका छन्। अहिले कुनै पनि दलको जिटिएसँग सिधासिधा सरोकार छैन।
सरकारको हातमा रहेको जिटिएको सांस्कृतिक विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा किन अनित थापा, पूर्व जिटिए पूर्व अध्यक्षलाई मात्र निमन्त्रणा?दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बालाई बोलाइएन कारण कार्यक्रम राज्य सरकारको हो। तर राज्य सरकारको निकट रहेको भनिएका विमल गुरुङ अनि हिल तृणमूलका नेतृत्व किन अनुपस्थित रहे होला? किन दोस्रो खेमा अध्यक्ष विनय तामाङ कार्यक्रममा देखिएनन्? आजको कार्यक्रमले नयाँ राजनैतिक समिकरण बारे केही भन्न खोजिरहेको त छैन?
पहाडको राजनीति दुई किसिमको छ। एउटा देखाउने। देखाउने राजनीतिले जातिको मुद्दा अनि चिन्हारीको प्रश्न गर्छ। त्यसैले हरेक भोटको समय गोर्खाल्याण्ड गुञ्जन्छ। अर्को हो कुर्सिको राजनीति। जसले देखाउने राजनीति गर्न सक्यो, व्यवस्थाको कुर्सी उसैको हो। वास्तवमा पहाडको राजनीति जिटिए अथवा लाल कोठीको वरिपरि घुमिरहने राजनीति मात्र हो।
विधानसभा चुनाव अगाडि जिटिएको राजनैतिक नियुक्ति भएको कारण अध्यक्ष अनि बोर्डलाई चुनाव आचारसंहिताको कारण हटाइयो। अहिले सम्म जिटिए एक प्रसाशकले चलाइरहेका छन्।
‘जबससम्म सुरेन्द्र गुप्ता चौकीमा छन्, हामीलाई आपत्ति छैन। स्थायी राजनैतिक समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सबै ठिक भइहाल्नेछ’, केही दिन अगाडि मात्र विमल गुरूङले भनेका थिए।
मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान आफूले गर्ने कुरा गरेपछि पहाडमा तृणमूल निकट दलहरूबाट धन्यवाद जनाउने होडबाजी चल्यो।
स्पष्ट छ, ममताको पिपिएस राज्यभित्रको व्यवस्था हो, जो जिटिएभन्दा थप केही प्रावधानसहितको हुनसक्छ।
तर चुनाव जितेको तीन महिना बितिसक्दा पनि यतातिर राज्य सरकारले खासै इच्छा देखाएको छैन। केही समयसम्मको निम्ति पहाडमा जिटिए नामकै व्यवस्था चल्नसक्ने स्थिति छ।
राज्य सरकारले जिटिए प्रशासनलाई प्रशासक अधिनस्थ धेरै लामो समयसम्म चलाइरहन चाहँदैन। यदि प्रशासक अधिनस्थ चलाउनु हो भने जिटिएको चुनाव चाँडो भन्दा चाँडो गराउनु राज्य सरकारलाई बाध्य बनाउँछ।
पहाडको अहिलेको राजनीति हेरौं। विमल गुरुङ आफ्नो राजनैतिक वर्चस्व बनाउन लागिपरेका छन्। राज्य सरकारले चुनाव लगत्तै जिटिएको कुर्सी नदिएपछि दोस्रो खेमामा जमेको धमिलो पानीमा लगातार बल्छी खेलिरहेका छन्।
चुनावमा विमल गुरुङले तृणमूल कांग्रेसलाई खुल्ला रुपमा समर्थन गरे। हिल तृणमूलले पनि आफ्नो दिदीलाई विमल गुरुङले सघाएको देखेपछि दाज्युलाई चुनावमा सहयोग गर्ने घोषणा गरे।
राज्य सरकारले आयोजना गरेको भानु जयन्तीको आजको कार्यक्रममा निम्तो पाउन विमल गुरूङ अनि हिल तृणमूलका नेतृत्व हकदार हुन्। तर निमन्त्रणा पाएका पहाडका नेतृत्वको सुचिमा किन अनित थापा मात्र?
अनित थापालाई बोलाइनको पछाडि मुख्मन्त्रीको परामर्श रहेको अनित थापाका निकट रहेका कतिले खुलाएका छन्। यसमा कति सत्य छ, हेर्न लायक कुरा बन्नेछ।
दुई हप्ता अगाडि उत्तर बङ्ग संवाद नामक समाचारपत्रले अनित थापा जिटिए चौकीको लागि राज्यको प्राथमिकतामा रहेको खुलाएको थियो। जुलाई पहिलो साताभित्रै अनितलाई राज्य सरकारले जिटिएको चौकी दिने कुरा समेत खुलाएको थियो।
सुत्र अनुसार अनित थापा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसँग लगातार सम्पर्कमा छन्। हाल पहाडलाई लिएर नयाँ रणनीति तयार गर्ने काम चलिरहेको छ।
के राज्य सरकारको निम्ति अनित नै पहाडका नेता हुन्? यदि यस्तो भए विमल खेमा अनि हिल तृणमूलको नयाँ कदम कस्तो हुन्छ? हेर्न लायक कुरा बन्ने छ।